हार्दिक बधाई, केपि ओली फेरी एमालेको अध्यक्ष ! चौतर्फी ओलिकै जय जय कार – Points Nepal
हार्दिक बधाई, केपि ओली फेरी एमालेको अध्यक्ष ! चौतर्फी ओलिकै जय जय कार
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १४, २०७८ समय: ४:४२:१०
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष छनोटमा स-कस देखिएको छ । रावलको अडान र ओलीको पक्षमा सर्वसम्मतको बहसमा केन्द्रित चितवनमा भेला भएकामध्ये एकजना नेता भने कार्यकारी राजनीतिक जीवनको अन्तिम लडाइँमा छन् ।
उनले आफूमाथि राखेर सहमति नहुने सन्देश ओलीलाई दिइसकेका छन् । संसदीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म पराजय नभोगेका नेम्वाङ सहमति नभए निर्वाचनबाटै भए पनि पदाधिकारीमा अटाउनेमा ढुक्क छन् । आफूले अहिलेसम्म चुनाव नहारेको बताउने नेम्वाङ सहमतिको नाममा ओझेलमा नपारिए वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेललाई सहजै पराजित गर्ने आंकलनसहित निर्वाचनमै जान चाहिरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष छनोटमा सकस देखिएको छ । रावलको अडान र ओलीको पक्षमा सर्वसम्मतको बहसमा केन्द्रित चितवनमा भेला भएकामध्ये एकजना नेता भने कार्यकारी राजनीतिक जीवनको अन्तिम लडाइँमा छन् । सालमा अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट उदाएका इलामे नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ चितवनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उनलाई ओलीले राष्ट्रपतिको आश्वासन देखाए पनि मानेका छैनन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेलले पनि दाबी गरेका छन् ।
Last Updated on: November 30th, 2021 at 4:42 am
१३५६ पटक हेरिएको